Qormo aad u xiiso badan oo ku saabsan asalka hidaha dadka 5oomaaliyeed. – Gedo Times
Qormo aad u xiiso badan oo ku saabsan asalka hidaha dadka 5oomaaliyeed.
4th May 2017 admin Wararka Maanta 0
Asc:- Hurdo wacan dhamaan bahdaan ka beermoow warsan Iyo weersan Insha allaah Aamiin.
Aqriste sannadii 2013-kii, ayaa wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka ay Canfartu degto waxaa laga helay qalfoof dadeedkii ugu cimriga weynayd taariikhda noolaha taas loogu magac daray Lucy , maalintaas kadib dowladda Ethiopia waxay go’aan satay innay isku naanaysto magac maamuuseedka la dhaho The Land of Origin oo ah dalkii dunidu ka soo Fircantay.
Kadib safarkii Madaxweyne Farmaajo uu ku tagay dalka Ethiopia ayaa koox xooggaa wax magarato ah oon saas u sii fogayn waxay baraha Bulshada ku qoreen qoraalo xanafaysan oo u qormaya in Ethiopia Na sheeganayso.
Waxaan haddaba hoos kuu dhigay daawade sawirada Madaxweynayaal dalal Afrikaan ah iyo Raysal Wasaaraha dalka Ethiopia oo kula sawiran sabuurad maamuuseed lagu xardhay erayga dalkii laga soo Fircamay.
Waxaan kaloo hoos kuu dhigay sawirka qalfoofta loo bixiyay Lucy ee laga helay deegaanka Canfarta.
Waxaan gunaanadkii aqristoow hoos kuu dhigay oo kale gabay uu tiriyay allaha u raxmee Abwaan Yamyam 1981-kii kaas oo uu uga hadlayo asalka hidaha dadkeenna iyo halkuu kasoo jeedo iyo dadka dunida innaan annaga 5oomaali ahi ugu Cimri weyn nahay aanna annagu mudan nahay magaca ah dalkii Faraca dunida, asaga oo uu rabbi ha u raxme Abwaan Yamyam kuugu sharaxay suugaan taada afka hooyo ee aqriste aqris wacan barro kana faa’iideyso oo ku faan hidahaaga guunka ah oo ku faan.
Gunaanadkii-Waxaan hoos kuu dhigay gabayga go’aanka iyo taladu waa taada ee aqris wacan.
Dadka waw gu’ weynahay
Guun soo jiraan ahay
Nuux iyo gadaashii
Duufaan ka guurkii
Baddii jiidhay gabiyada
Dhulkii giigsanaan jiray
Meeshuu ku kala go,ay
Gardafey ha noqotee
Weli goobti baan naal
Waan kala gurracannahay
Muuqaalka guud iyo
Dhaqamada is geli kara
Isku gibilna waan nahay
Oramada iyo gaallaha
Mahad aan go,ay iyo
Gallad eebahaa lehe
Uu geyiga usoo diray
Ninba diin u gooniya
Hala gola yimaadee
Isu soo gurkoodii
Markii la isu geeyiyo
Waxaan haysanaa gacan
Geesigay ku taalla
Yahay furaha lagu galo
Albaabada Janada guud
Oo aan nin garab maray
Gadan Karin muftaax kale
Muslim baanu nahay garo
U gudbiya walaalaha
Guud ahaanna uga diga
Fal xumaato geli kara
Geerida iyo dhimashada
Yaasiinkaan qofkii go,a
Ikhlaas lagu guneeyaa
Godka lagula hooyaa;
Marka qaranba goonidi
Afrikada lakala guro
Bulshada geeska bari xiga
Ku gadaaman baa nahay;
Qaran iyo gob baanahay
Gacantiisa kala baxay
Calan midab u gaariyo
Sumadda lagu gartaa tahay
Xiddigtaa shan geeska ah
Geysh noo ilaashiyo
Geesi uu gu dhaartoo
Gabbashada ka caagiyo
Gabyaa baanu leenahay
Markay goob dagaal tahay
Guubaabada ku caanoo
Dhex galaan cadaawaha
Gaadiid baanu leenahay
Hadba waanu guurnaa
Deyrtiyo gugii baan
Hadba meeshi geeda leh
Gadaal looma sahanshee
Galbeed baan u soconaa
Lo,da geeska weyn iyo
Ari nooga goohaa
Gocayada ku shubanaa
Ningixaa la giijaa
Gaaridu ku heestaa
Burcadkaa ka soo go,a
Digsaa lagu guraayoo
Galabtii la shiilaa
Caanooyada ma gaarnee
Ama keyd la geliyaa
Goosaar ka dhigannaa
Gaawaan u culannaa
Gaaxdaan ka maalnaa
Marna dhinaca guurkaan
Gabadhii jacayl mudan
Yarad loogu geeyaa
Aqal loogu gooyaa;
Guri baannu leenahay
U eg maabka guudoo
Aan dunida laga garan
Marka rarada laga guro
Baal dahaba gelinnaa
Martida gaajo haysoo
Gasiin kale an loo hayn
Ayaa waajib gudashada
Hasha geela ka irmaan
Gole loo dugsiiyaa
Hilbaha loogu geeyaa
Intii garasho dheer iyo
Guud ahaanba culimada
Gaarbaa loo xurmeeyaa.
Go, cad baannu xirannaa
Gammuun baannu qorannaa
Gabooyaha la geliyaa
Golxab baannu tummannaa
Gaashaan baan yagleellaa
Gocandhada ka sidannaa
Geed baa la waabaa
Gogol baa la fidiyaa
Guurti lagu casuumaa
Gar kastoo adayg badan
Way tala gorfeeyaan
Go’aankoodu waa xeer
Dhibta soo gunaanada
Marka dhiig la kala galo!
Daqar iyo qur gooyana
Diintay u gudubtaa
Xaqaa lagu guddoonshaa !
Hangoolka iyo gudintaan
Geedaha ku jarannaa
Midba gees ku beeraa
Xiliyada la goostaa
Ceel kastoo gundheerbaa
Abaarta uga gudubnaa
Dembi geleddii Qaabiil
Haabiil markuu go,ay
Dhirta qodaxda guratiyo
Taariikh ma garatooy
Godkii ugu horreeyee
Ina aadan galaybaan
Dowlada Soomaliya ayaa talaabo adag qaaday oo Hanti Dhowrikii Guud Dr-Nuur Faarax Jimcaale Oo Caawa Xilii laga Qaaday
Daawo: Wasiiraka Arrimaha Gudaha Soomaliya Oo Soo Kormeeray Magaalada Cadaado